Faahfaahin laga helaayo dagaalkii maanta ka dhacay magaalada baledweyne – STAR FM SOMALIA
Faah faahin, ayaa waxay ka soo baxeysaa dagaal xoogan oo maanta ka dhacay Galbeedka Magaalada Baledweyne Ee Gobolka Hiiraan, iyadoo dhinaca kalana uu dagaalku sababay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo mid maaliyadeedba leh.
Dagaalkan, ayaa wuxuu u dhaxeeyay laba ka mid ah beelaha wada degga xaafadda Hawlwadaag, iyadoona uu salka ku haaya dilal xagga aanooyinka beelaha la xiriira, oo muddooyinkii ugu dambeysay ka dhacaayay Baledweyne iyo deegaanada miyiga.
Ugu yaraan 7 qof, ayaa waxaa la xaqiijiyay in lagu dilay dagaalkii maanta, halka 32 kalana ay ku dhaawacantay, kuwaa oo isugu jira dhinacyadii wada dagaalamay iyo weliba dad shacab ah.
Agaasimaha Isbitaalka Baledweyne, Axmed Maxamed Khaliif, ayaa wuxuu xaqiijiyay in maanta loo keenay dhaawacyo fara-badan, isla-markaana ay bilaabeen inay la tacaalaan xaaladda dadkaasi.
Agaasimaha, ayaa sheegay in dadka qaarkii oo dhaawacyo culus soo gaaray ay xaaladoodu garaab tahay, hase ahaatee ay juhdi badan ku bixinayaan, sidii xaaladda dadkaasi ay wax kaga qaban lahaayen.
Shacabkii deegaanka, ayaa waxay bilaabeen inay guryahooda isaga cararaan, maadaama ay suurtagal tahay in markale ay wada dagaalamaan dhinacyada isku haaya xaafadda Hawlwadag.
Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Amisom, ayaa waxay wadaan dadaalo lagu doonaayo in wax looga qabto dhiilada colaadeed ee ku soo korortay Xarunta Gobolka Hiiraan.
Xaalada magaalada Beledweyn oo saaka degan, kadib dagaalkii shalay iyo xalay ka dhacay halkaas